काठमाडौँ, ६ जेठ । कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा आन्तरिक मूल्यांकनको अधारमा गर्न सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आन्तरिक मूल्यांकनको अधारमा परीक्षा गर्न सिफारिस भएको बताएका छन् ।
बोर्डले जेठ १३ गतेबाट एसईई तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा १२ को परीक्षा लिने निधो गरेको थियो । कोरोना बढ्दै गई निषेधाज्ञाको चरणमा पुगेपछि परीक्षा स्थगित गरी परिवर्तित परिस्थितिमा परीक्षाको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन बनाइएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. पौडेलले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदनबाट आन्तरिक मूल्यांकनकै अधारमा गर्न सिफारिस गरेको जनाए ।
छलफलमा सहभागी राजधानीको नील वाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेलले एसईईको परीक्षा गत वर्षकै जस्तो आन्तरिक रूपमा लिने र विद्यालयलाई नै जिम्मा दिन सुझाव दिएको बताइन् ।